सुधीर दाहाल : अध्यक्ष , नेपाल औषधि व्यवसायी संघ मकवानपुर
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ मकवानपुरको अध्यक्षमा सुधीर दाहाल निर्वाचित भएका छन् । औषधीले मानव जीवनसंग महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । औषधि व्यवसायको मकवानपुरमा अवस्था कस्तो छ ? व्यवसायिक हकहितका लागि औषधि व्यवसायी संघको योजना चाँही कस्तो छ ? मध्यस्थता सहकर्मी रामहरी गौतमले संघ अध्यक्ष दाहालसंग कुराकानी गरेका छन् ।
१.औषधी व्यवसायी संघ मकवानपुरको नेतृत्व पाउँदा कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
मकवानपुरका औषधि व्यवसायीहरुले म संग व्यवसायिक भरोसा खोजेको मैले पाएको छ । सम्पूर्ण व्यवसायीहरुले केही गर्ने, विश्वासिलो, ईमान्दार र संघको हितमा लाग्ने व्यक्ति ठानेर नै मलाई अध्यक्ष छान्नु भएको हो भन्ने मैले बुझेको छु । जसले मलाई जिम्मेवारी दिनुभयो म उहाँहरुप्रति आभारी छु । उहाँहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
२. तपाईको कार्यकालमा योजना चाहीं के बनाउनु भएको छ नि ?
कार्यालय स्थापना,सम्पूर्ण व्यवसायीको तथ्याङ्क संकलन, सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई एक–आपसमा जोड्ने सञ्चारको स्थापना गर्ने, औषधी व्यवसायी संघ केन्द्र र अञ्चल दुवैसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने काम गर्नेछु । यस्तै, व्यवसायीको कल्याणकारी कोषका लागि पनि पहल गर्ने मैले योजना बनाएको छु । व्यवसायीको सल्लाह तथा सुझावका आधारमा हामी योजना बनाएर अघि बढ्नेछौं ।
३.मकवानपुरमा औषधी व्यवसायीको अवस्था चाँही कस्तो छ ?
औषधि व्यवसाय कठिनपूर्ण व्यवसाय हो । औषधि मानव शरीरसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने भएकाले निकै संवेदनशील विषय पनि भयो । व्यवसाय गर्दा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । उत्तिक्कै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय गरिरहेका छन् ।
४. मकवानपुरमा खपत हुने औषधी देशभित्रैको छन् की बाहिरबाट पनि आउँछन, प्रष्ट पारिदिनुहोस् न ।
पहिला भन्दा अहिले विभिन्न प्रकारका औषधिहरु नेपालमै उत्पादन भइरहेका छन् । नेपाली कम्पनीले उत्पादन गरिरहेका लाइफ सेभिङ ड्रगहरु नेपाल बाहिर निर्यात गर्ने काम पनि भइरहेको छ । कतिपय नेपालका र कतिपय बाहिर उत्पादन भएका औषधि मकवानपुरमा खपत भइरहेको छ ।
५. यहाँहरुको समस्या, चुनौती चाहीँ के हुन् ?
नार्कोटिक ड्रगहरुलाई व्यवस्थापनमा समस्या रहेको छ । लागूऔषध सम्बन्धी समस्या र यसको निवारण ठूलै चुनौती रहेको छ ।
६.औषधी व्यवसाय र अन्य व्यवसायका बिचमा के भिन्नता छ भन्ने लाग्छ तपाईलाई ?
औषधी व्यवसाय र अन्य व्यवसायमा धेरै भिन्नता छ । मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष रुपले खेल्नुपर्ने भएकोले यो व्यवसाय अरुभन्दा धेरै जोखिमपूर्ण व्यवसाय हो ।
७. यहाँहरुको स्थानीय तह, राज्यसंग चाहिँ केहि माग छन् कि ?
एकाध व्यवसायीले गरेको गलत कार्यलाई सम्पूर्ण व्यवसायीसँग जोडेर मर्यादित व्यवसायीलाई नकारात्मक नलिदिनुहुन सरोकारवालालाई आग्रह गर्दछु । व्यवसायिक रुपमा अघि बढ्नका लागि हामीहरुलाई साथ सहयोग गरिदिन म आग्रह गर्दछु ।
८. अन्त्यमा के भन्नु हुन्छ ?
औषधि भनेको मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकोले अन्य व्यवसायी भन्दा फरक र पृथक औषधि व्यवसाय रहेको छ । यस व्यवसाय गर्दा मर्यादित र चनाखो भएर इमान्दारिताका साथ लागिदिन म व्यवसायिक साथीहरुसंग आग्रह गर्दछु । कदम्कथाचित सही कार्य गर्दा पनि कुनै समस्या आइपरेमा समस्याको हक खोज्नका लागि म तयार छु ।